Sida loo beddel XMBC Default in VLC Player
In badan oo naga mid ah ay isticmaasho laba ama in ka badan ciyaaryahan warbaahinta s u ciyaaro videos. Tusaale ahaan, Windows Media Player ma ciyaari karo. flv files. Doorashada A caadi ah noo leh waa in la isticmaalo ciyaaryahanka VLC, kaas oo ka ciyaari kara qaab kasta, ka .mkv in .flv. In badan oo naga mid ah waxay leeyihiin VLC ciyaaryahan default our.
VLC caawin doonaa file aad si degdeg ah u furi la double click ah oo ay ku riyaaqaan - ma jirto dhibaatada joogtada ah ee video ama faylka aan la taageeray. Halkan, waxaan ka hadli doonaan tallaabooyin ay ku VLC ka dhigi doontaa sida ciyaaryahan default.
Qeybta 1: Windows: Sida loo beddelo ciyaaryahan XMBC in ay VLC ciyaaryahan default?
Qeybta 2: Mac: Sida loo beddelo ciyaaryahan XMBC default in ay VLC?
Waxaa had iyo jeer waa kuwa caqliga leh in ay sii laba ciyaaryahan warbaahinta ku saabsan habka. Si kastaba ha ahaatee, sii ciyaaryahan VLC Media Player ku wehlin doona ciyaaryahanka default. Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u sameeyaan ciyaaryahan VLC sida ciyaaryahan default.
1. sahamisa file Open iyo in file kasta oo saxaafada oo la furay XMBC tagaan. Hadda xaq guji file video ah, u tag fursad u furan leh, iyo maraan barnaamijka default dhigay.
2. Ka dib markii gujinaya barnaamijka set caadiga ah waxaad u baahan doontaa liiska barnaamijyada ka furan kartaa file ka. Haddii aad VLC lagu rakibay habka waxa kale oo la soo daabici doonaa. Just guji ku yaal.
The files of qaab in hadda mar walba la furi doonaa VLC by default. Just laba jibaar guji ku yaal iyo hubi haddii ay furmay la VLC ciyaaryahanka .
Mac kale oo uu leeyahay ciyaartoy fiican by default sida Lugood ama XMBC laakiin waxaa jira qaabab kala duwan in aanay taageerayn. Waxaad ku rakiban kartaa VLC u Mac goobta videolan.org rasmi ah. Download version ugu danbeeyay ee ay leeyihiin taageerada qaabab ugu dambeeyey.
1. In la sahamiyo habka faylka isticmaala ciyaaryahan XMBC. Tag tab File ah ee bidixda xagga kore ee shaashadda. Hadda, falgali Helo info.
2. Haddaba u tag furan qaybta in guddiga. Waxaa jiri doona liiska barnaamijka laga heli karaa habka. Haddii aad ku rakibtay VLC ku saabsan nidaamka, waxa ay noqon doontaa liiska. Dooro VLC ah liiska.
Ama: Waxaad had iyo jeer raaci karaan talaabo la mid ah loo isticmaalo daaqadaha aad heli kartaa furan by fulinaya xaq guji file ah oo dhigay VLC sida default.
3. Hadda beddelo fursad u tahay in la beddelo oo dhan si loo hubiyo in faylka la qaab isku mid ah u furan leh vlc by default. Just furo file kasta oo ay labo gool ilamaha si aad u hubiso haddii laga furay ciyaaryahanka VLC.
Mar walba ee aad dib u bedelan kartaa in ciyaaryahan warbaahinta kala duwan mar kasta oo aad u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto VLC, mar walba waa la cusboonaysiiyaa in ay taageero u qaabab cusub. Xusuusnow in isticmaalka VLC ciyaaryahan default aad sahal doonaa badan oo welwelkaaga. Waayo, mid, waxaad haysan lahaa in la yaabanahay oo ku saabsan diinta videos ka mid qaab file mid kale oo iyaga si fudud u ordi karaan, kaliya ka dib markii download la dhammeeyo.
> Resource > VLC > Sida loo beddel XMBC Default in VLC Player?